လထေု အရညျအသှေး အလှနျဆိုးဝါး နတေဲ့ ရနျကုနျ နဲ့ အဆိပျငှတှေ့ေ နစေ့ဥျ ရှူနရေတဲ့ ရနျကုနျသားမြား – Let Pan Daily
ရနျကုနျမွို့ရဲ့ လအေရညျအသှေး အလှနျဆိုးဝါးနပေါတယျ၊ အအေးပိုလာတာ နဲ့အမြှ အေးတဲ့လကေ လေးပွီး အောကျမှာထိုငျနပေါတယျ၊ လူတှကေ အေးတော့ ခွံထဲမီးရှို့တယျ၊ ကာဗှနျလဟော အပျေါမတကျနိုငျပဲ လေးနတေဲ့လအေေးနဲ့အတူ မွို့ထဲပတျနတေယျ။ မနကျ ၉/၁၀ နာရီလောကျလညျးကရြော ကားတှကေ ကာဗှနျတှေ၊ ထမငျးဟငျးခကျြတဲ့ အငှတှေ့ေ၊ ကားသှား လို့ထလာတဲ့ ဖုနျနုနုတှေ လထေဲတကျလာရော။ ပိုဆိုးလာပါတယျ။
ပွဿနာက ဆောငျးတှငျးဆိုတော့ လမေသနျ့တာမသိဘူး၊ မွူလိုလို နှငျး လိုလိုမို့ ကွညျနူးကွတယျ၊ လူတှကေ အားကစားထှကျလုပျကွတယျ၊ အားကစားလုပျတဲ့အခါ အသကျရှုရတာပိုလာတယျ၊ နဂိုလျကမသနျ့တဲ့လနေဲ့ ဝတျမှုံနဲ့တှတေဲ့အခါ ရငျကွပျပါတယျ။ ဓါတျမတညျ့ရောဂါ အယျလာဂြီဖွဈလာတယျ။ နဂိုလျက အဆုတျမကောငျးရငျ အဆုတျကငျဆာ နဲ့ တခွားကငျဆာရောဂါတှေ ဖွဈလာပါတယျ။ သနျ့စနျ့လေ မရှုရတော့ autoimmune သှေးလဖေကျနာ နဲ့ တခွားရောဂါပိုးတှေ ကွှလာပါတယျ။ ခန်တာကိုယျထဲက ငွိမျနတေဲ့ ဘကျတီးရီးယားအမြိုးမြိုး အောကျဆီဂငျြရှိရာနရော ရှရေ့ငျး ရောဂါကွှလာတတျပါတယျ။ ဒီလိုအခွအေနဟော အလှနျအန်တရာယျမြားပါတယျ။
ကိုဗဈဗိုငျးရပျဈက နရောအနှံ့ ၊ အဆုတျက အောကျစီဂငျြဝတ မရတာနဲ့ပေါငျးရငျတော့ မွနျမာတှေ အလှနျဝဋျကွီးပါတယျ။ လထေုအရညျအသှေးထိမျးခြုပျဖို့ လိုတယျလို့ အုပျခြုပျသူတှနေားမလညျ ပညာဥာဏျမပွညျ့ဝတဲ့မွို့ပါ။ မွို့ထဲမှာ မီးရှို့သူ တှရေ့ငျ ဓါတျပုံရိုကျပွီး စညျပငျတိုငျကွပါ။ အပွငျမှာထှကျပွီး လကေ့ငျြခနျး (လုံးဝ) မလုပျသငျ့ပါ။ အိမျတံခါးမြားပိတျထားသငျ့ပါတယျ။ အိမျတှငျး လသေနျ့စငျစကျ ဖှငျ့ထားသငျ့ပါတယျ။ အပွငျထှကျလြှငျ Mask တပျပါ။ အဆုတျကောငျးစတေဲ့ ငရုတျ၊ ငရုတျပှ၊ Beet ၊ ပနျးသီး၊ ဖရုံသီး၊ ဆနှငျး၊ ခရမျးခဉျြသီး၊ လကျဖကျ စတာတှေ စားသငျ့ပါတယျ။ လမေသနျ့တာ ဘယျလောကျထိကွာမလဲ? နောကျ တလလောကျအထိ လအေရညျအသှေးဆိုးနပေါမယျတဲ့၊ အရှလေ့လေေး မြားမြားတိုကျမှ သိသာပါလိမျ့မယျ။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လေအရည်အသွေး အလွန်ဆိုးဝါးနေပါတယ်၊ အအေးပိုလာတာ နဲ့အမျှ အေးတဲ့လေက လေးပြီး အောက်မှာထိုင်နေပါတယ်၊ လူတွေက အေးတော့ ခြံထဲမီးရှို့တယ်၊ ကာဗွန်လေဟာ အပေါ်မတက်နိုင်ပဲ လေးနေတဲ့လေအေးနဲ့အတူ မြို့ထဲပတ်နေတယ်။ မနက် ၉/၁၀ နာရီလောက်လည်းကျရော ကားတွေက ကာဗွန်တွေ၊ ထမင်းဟင်းချက်တဲ့ အငွေ့တွေ၊ ကားသွား လို့ထလာတဲ့ ဖုန်နုနုတွေ လေထဲတက်လာရော။ ပိုဆိုးလာပါတယ်။
ပြဿနာက ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ လေမသန့်တာမသိဘူး၊ မြူလိုလို နှင်း လိုလိုမို့ ကြည်နူးကြတယ်၊ လူတွေက အားကစားထွက်လုပ်ကြတယ်၊ အားကစားလုပ်တဲ့အခါ အသက်ရှုရတာပိုလာတယ်၊ နဂိုလ်ကမသန့်တဲ့လေနဲ့ ဝတ်မှုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ရင်ကြပ်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်ရောဂါ အယ်လာဂျီဖြစ်လာတယ်။ နဂိုလ်က အဆုတ်မကောင်းရင် အဆုတ်ကင်ဆာ နဲ့ တခြားကင်ဆာရောဂါတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ သန့်စန့်လေ မရှုရတော့ autoimmune သွေးလေဖက်နာ နဲ့ တခြားရောဂါပိုးတွေ ကြွလာပါတယ်။ ခန္တာကိုယ်ထဲက ငြိမ်နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားအမျိုးမျိုး အောက်ဆီဂျင်ရှိရာနေရာ ရွှေ့ရင်း ရောဂါကြွလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေဟာ အလွန်အန္တရာယ်များပါတယ်။
ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်က နေရာအနှံ့ ၊ အဆုတ်က အောက်စီဂျင်ဝတ မရတာနဲ့ပေါင်းရင်တော့ မြန်မာတွေ အလွန်ဝဋ်ကြီးပါတယ်။ လေထုအရည်အသွေးထိမ်းချုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ အုပ်ချုပ်သူတွေနားမလည် ပညာဥာဏ်မပြည့်ဝတဲ့မြို့ပါ။ မြို့ထဲမှာ မီးရှို့သူ တွေ့ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး စည်ပင်တိုင်ကြပါ။ အပြင်မှာထွက်ပြီး လေ့ကျင်ခန်း (လုံးဝ) မလုပ်သင့်ပါ။ အိမ်တံခါးများပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ အိမ်တွင်း လေသန့်စင်စက် ဖွင့်ထားသင့်ပါတယ်။ အပြင်ထွက်လျှင် Mask တပ်ပါ။ အဆုတ်ကောင်းစေတဲ့ ငရုတ်၊ ငရုတ်ပွ၊ Beet ၊ ပန်းသီး၊ ဖရုံသီး၊ ဆနွင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ လက်ဖက် စတာတွေ စားသင့်ပါတယ်။ လေမသန့်တာ ဘယ်လောက်ထိကြာမလဲ? နောက် တလလောက်အထိ လေအရည်အသွေးဆိုးနေပါမယ်တဲ့၊ အရှေ့လေလေး များများတိုက်မှ သိသာပါလိမ့်မယ်။